SIDA LOO KALA SAARO INTA U DHAXAYSA BOQOSHAADA LA CUNI KARO IYO KUWA BEEN ABUUR AH - MUSHROOMS
Farqiga u dhexeeya boqoshaada la cuni karo iyo calaacalaha, sida loo kala saaro xoortada xumbo ka soo baxa boqoshaada caadiga ah
Boqoshaada Honey waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah boqoshaada ugu caansan agaric.
Dabcan, qaabka la qaboojiyey ama la kariyay, waxay si fudud ugu iibsan karaan dukaanka, laakiin mushahaarka koray ee xaaladaha dabiiciga ah ma aha dhadhan isku mid ah iyo caraf ud sida xaywaanka kaynta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u fahamto waxa boqoshaada ay tahay in la ururiyo oo cuno iyaga oo aan halis galin noloshooda.
Halkee iyo goorta la ururiyo fangaska, sharaxaada boqoshaada
"Dhaqanka Honey" - Tani waa magac caan ah oo quseya qoysaska kala duwan iyo noocyada boqoshaada, isku mid ah muuqaalka laakiin kordhaya meelo kala duwan waqtiyo kala duwan. Waxaan dhihi karnaa mid ama noocyo kala duwan oo ah boqoshaada ayaa lagu dabooli karaa wax kasta oo raaxo ah, marka laga reebo, laga yaabo, kaliya, aagga ruqsadda.
Sida magacu soo jeediyo, boqoshaada waxay badanaa ku koraan kooxo badan oo ah jirridda iyo geedaha (nool ama dhintay), laakiin sidoo kale waxaa jira noocyo dareemaya raaxo u dhow geedo yar yar ama geedo daciif ah, geesaha kaynta iyo xitaa dhulka.
Jawaabta su'aasha, marka boqoshaada koraan, raaco magaca noocyada ugu caansan, siday u kala horreeyaan, waxaa suurtagal ah in la soo ururiyo boqoshaada ku dhowaad sanadka oo dhan: Agoosto illaa bishii 11aad illaa bishii Nofeembar, meeyada cagaaran - laga bilaabo Maajo ilaa Juun iyo laga bilaabo Sibtembar ilaa Oktoobar, xagaaga - laga bilaabo Agoosto ilaa Oktoobar, dayrta - laga bilaabo Agoosto ilaa Oktoobar, Jiilaalka - laga bilaabo Sebtembar ilaa Nofeembar.
Guud ahaan, way sahlan tahay in la aqoonsado cadayga. Waa miisaan dabacsan, oo khafiif ah oo qumman (marmarka qaarkood ilaa 15 cm) stem, bunni ah (laga bilaabo malabka iftiinka ilaa mugdi, iyada oo ku xidhan da'da iyo meesha koritaanka) midabka, sida caadiga ah lagu qurxiyo laxanka foolka.
Koofiyadu waa xajmiga, xarrago, sida caadiga ah ayaa hoos loo dhigaa. Nidaamka daboolka ee miisaanka qaangaarka ah wuxuu u egyahay dallad siman, dhalinyaradana waxaa lagu daboolayaa miisaan yar. Qalabka daboolka noocyada kala duwan wuxuu noqon karaa mid isku mid ah, midab jaalle ah ama xitaa guduudan. Tani waa sharaxaad guud, sifo kasta oo noocyada kala duwan ee malab.
Maxaad u baahantahay inaad awood u yeelatid inaad kala soocdo boqoshaada laga bilaabo "mataano"
Dhamaan waxyaabaha soo jiidashada leh, ururinta boqoshaada waxay khatar weyn u tahay khatarta khatarta ah, sababtoo ah boqollaadahani waxay leeyihiin "laba mataano ah", taas oo ah mid ku filan oo ku filan soo iibsadaha.
Waxaa jira boqoshaada been abuur ah iyo mid la cuni karo, inkasta oo hal nooc oo kaliya ay dhab ahaantii u nugul yihiin boqoshaada beenta ah, inta kale ee ka mid ah boqoshaada aan la dabooli karin ama xaalad ahaanba, si kastaba ha noqotee, si looga fogaado shaybaarka shaaha ee ku jira dambiyada, waxaa fiican inaad ogaatid waxa aad uruurineyso.
Ma taqaanaa? Sunta mozhnopenok sulfur-jaalaha ah ayaa si weyn u dhaawici kara nidaamka dheefshiidka.
Si loo ogaado khatarta boqoshaada been abuurka ah, waxaa ku filan in ay ku fekeraan magacooda. Kuwani waa boqoshaada, aad u la mid ah kuwa ka mid ah kuwa la cuni karo, waxay ku koraan isla xaaladaha isla muddadaas oo ah sida boqollada runta ah.
Dadka qaata mushaharka ayaa ku doodaya in aysan jirin xeerar isdabajoog ah oo loo yaqaan 'mushroom la cuni karo' mid ka mid ah sunta, waxaad u baahan tahay inaad si cad u baratid calaamadaha labadaba, oo baro inay ku gartaan goobta.
Si taxadar leh u akhri sharaxaad ka mid ah boqoshaada la cuni karo iyo labadooda ee buugga yaalla ama bogga khaaska ah, dib u eeg sawirada iyo sawirada labadaba, hubso in dhammaan kala duwanaanta iyo dabeecadaha gaarka ah ay kuu cad yihiin, oo kaliya kadib markaad ka baxdo.
Ha iloobin xukunka macquulka ah ee ka soo jiidashada musqusha ee ku saabsan suurtagalka dembiga: shaki kasto macnaheedu waa in musqusha laga saaro isla markiiba.
Sida loo kala saaro boqoshaada caadiga ah oo been ah
Qaybta mushaharka dabiiciga ah, su'aal muhiim ah waa sida loo kala saaro boqoshaada la cuni karo oo been ah.
Tan waxaa lagu sameyn karaa sifooyin kala duwan - labadaba dibadda (qaab, midab, iwm.), Iyo urin iyo xitaa dhadhamin.
Muuqaalka ugu caansan, kaas oo u ogolaanaya in ay kala soocaan toonta la cuni karo oo been ah, waa joogitaanka ee loogu yeero "goono" (giraanta xuubka leh ee lugta), taas oo ka maqan tijaabooyin been ah.
Boqoshaada la gashado badiyaa waa mid aad u iftiimaya, "keenaya" daboolka ka badan kuwa la cuni karo. Waxaa jira suurto gal iyo lebbiska-cas, iyo sulub-jaalaha ah, halka hooska la cuni karo waa mid caan ah oo aan la jarin.
In malab agaric been ah, si ka duwan cuni karo, Ma jiraan miisaanno dabeeci ah oo ku yaal koofiyad. In kastoo aynu kor ku soo sheegnay in miisaanku leeyahay awood u leh inuu ku foorarsado da'da honeydew, oo sidaas awgeed, ma arki doontid muuqaalkan muuqda ee boqoshaada jir ah.
Hase yeeshee, marka hore, boqoshaada qortaa waxay ku koraan tiro badan, guud ahaan "bouquet" waxaad marwalba ka heli kartaa shakhsiyaadka da'da yar, marka labaadna, way ka fiicantahay marka fungus la cuni karo ay ku jirto jiritaanka mid ama mid kale oo dabeecad ah halkii uu ka maqnaan lahaa (waxaa jira miisaan - si ay u qaataan), maxaa yeelay waxay ka fiican tahay in si qalad ah loo tuuro hooska dhabta ah marka loo eego si aan loogu talogalay inay ku cunaan been abuurka.
Eeg koofiyada hoostiisa hoostiisa. In agarics malab been ah, taargadu waxay yihiin huruud ah ama olive madow, in la cuni karo kuwaas oo ka mid ah midab leh oo huruud ah-caddaan ama kareem.
Mushahar aan la dabooli karin oo sunta leh waxay leeyihiin ur xun oo nacas ah, urta runta ah ee boqoshaada waa mid wacan.
Ugu dambeyntii, saxarka ah ee agaric malab la cuni karo waa wacan tahay dhadhanka, halka agarics been ah ayaa si cad u qadhaadh.
Si kastaba ha ahaatee, aqoonsashada boqoshaada sunta ah inay dhadhamiso waa jimicsi halis ah, waa ka fiicnaan inaadan ku dhicin.
Dhadhamiya malabkii malab
Erayada, daraasad taxaddar leh oo ku saabsan natiijooyinka dhammaan xuduudaha kor lagu sharxay waxay ka fogaanayaan khaladaadka. Hase yeeshee, waa in maskaxda lagu hayo in haddii lammaane qibrad leh uu si fudud u ogaanayo farqiga u dhexeeya laba lakab oo isku mid ah, markaa ururiyaha xayeysiisku waa inuu si gaar ah u taxaddaraa, sababtoo ah fikradaha sida midabka, urta iyo dhadhanka ayaa si gooni ah u arkaan dad kala duwan.
Ma taqaanaa? Calaamadaha lagu sumoobo boqoshaada beenta ah ayaa la dareemaa dhowr saacadood. Tilmaamaha ugu horeeya waa madax xanuun, kadibna dawakhaad, lallabbo, matag, oo ay weheliyaan xanuunka foosha ee gudaha caloosha. Is deji oo dhakhso ula tasho dhakhtar. Sunta tijaabooyinka been abuurka ah ma aha mid halis ah, laakiin iska indha tirida astaamaha xaaladaha qaarkood kama mid aha dhimashada.
Si looga hortago dhibaatooyinkaas, ka hor intaanad tegin "ugaadhsiga", si taxadar leh u darso su'aasha dhabta ah ee boqoshaada aad rabto inaad soo ururiso waqtigan sanadka iyo kalluunkan gaarka ah, goorta iyo sida ay u koraan.
Sida kor ku xusan, noocyada kala duwan ee la cuni karo ee boqoshaada waxay ku koraan meelo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan, isla sidaas ayaa quseeya mataano.
Tusaale ahaan, geedka jiilaalka wuxuu leeyahay boqoshaada goor dambe, miro-diirkeeduna wuxuu bilaabmaa dhamaadka xilliga dayrta oo wuxuu dhammaan karaa jiilaalka, sidaa daraadeed, aan yiraahdo, bisha Janaayo (agagaarka malabku wuxuu u muuqdaa ka dib markii kuleylka yar) kuleylka u dhintay sida tan la garan karo.
Laakiin miisaanka dhabta ah ee halista ah ee halista ah ee ku xusan annaga oo ka mid ah boqoshaada beenta ah waa soodhuumada-huruudda, taas oo lagu qaldami karo hooska dayrta. Laakiin xaqiiqda, farqiga u dhexeeya boqoshaada waa kuwo aad u muhiim ah, waxaad u baahan tahay inaad taxadar badan, taxaddar iyo dareen caadi ah.
Inta badan qiyaasaha xajmiga musqulaha ayaa xooga saaraya sharaxaadda boqoshaada, yiraahdo, boqoshaada furan, sida ugu habboon adigoo raacaya qaab midab leh. Si aad u akhrido suugaanta noocaas ahi kuma filna.
Waa inaad aragto "mushahar" ama "ugu yaraan" tixgelinta tirada ugu badan ee sawirkiisa, labadaba xirfad iyo hiwaayad labadaba. Muuqaalka muuqaalka fangasku aad ayuu u kala duwan yahay da'da; wakiillada noocyada isku mid ah aad ayay u kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay meesha koritaanka.
Waa muhiim! Ka fiirso sawirro kala duwan - boqoshaada la cuni karo iyo sunta, akhriya sharaxaadda, baro waxyaabo yar yar iyo, haddii aad shaki ka dareento, xulo inaad wax ka soo qaadatid waxyaabo ka badbaado badan oo la aqoonsan karo!
Tusaalooyinka khibradaha khamriga, imisa jeer la kariyey boqoshaada la soo ururiyey
Boqoshaada la cuni karo waa raaxo wanaagsan, laakiin diyaarinta boqoshaada ee cunto ah waxay leedahay qaar ka mid ah ujeedooyinka.
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso in lugta ee likaha, gaar ahaan qaybta hoose, waa mid aad u adag, sidaas boorsooyinka cuno oo kaliya cap of this likaha. Mushrooms waxaa loo isticmaali karaa inay sameeyaan marmar, shiil, saliid ama cusbo.
Mushutarka cusub ee la goostay waxay si deg deg ah u madoobaan, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in si dhaqso ah looga shaqeeyo. Haddii aad rabto inaad ka samayso beergooyska, boqoshaada ka dib markii aad qashin ku daadisid kaynta qashinka oo aad ka saartid tijaabooyinka da ' u dir barafeeyaha (si ka fiican si aad u isticmaasho qaboojiyaha qoto dheer), halkaas oo lagu kaydin karo sannad.
Habka labaad waa goobta ugu fudud ee la shaqeyn karo - qalajinta. Waxaad ku qallajin kartaa boqoshaada hawada furan, si aad u dhaqaajiso nidaamka - adoo adeegsanaya qallajiye khaas ah, ama foorno khafiif ah oo kuleyl ah.
Dhammaan kiisaska kale, boqoshaada si fiican ayaa loo dhaqaa iyada oo biyo socda. Marka xigta, hoos u dhaji kari biyo cusbayn oo isku kari ilaa shan daqiiqo. Xaydha soo dhalatay, taas oo ah borotiinno isku-dhafan, waa in laga saaraa qaadada qaadata.
Markaa biyaha ayaa la miiray, mid cusub ayaa la soo ururiyey, mar kale la keenay karkar, oo waxaa ku jira boqoshaada qiyaastii nus saac, ilaa iyo boqoshaada u degaan xagga hoose ee digsiga. Ka dib markaa, waxaa lagu tuuraa suunka, oo laga soo daayey biyo xad-dhaaf ah kadibna waxaa loo isticmaalaa si loo diyaariyo suxuuno kala duwan.
Waa muhiim! Biyaha oo ay boqoshaada la kariyey (labadaba koowaad iyo labaad) looma isticmaali karo.